१०० मिलियन यूरोमा युबेन्टस गएका रोनाल्डोको पारिश्रमिक कति ? रोनाल्डोको पारिश्रमिक छ आश्चर्यजनक !! - Experience Best News from Nepal
१०० मिलियन यूरोमा युबेन्टस गएका रोनाल्डोको पारिश्रमिक कति ? रोनाल्डोको पारिश्रमिक छ आश्चर्यजनक !!
फूटबल- युबेन्ट्स हालै मात्रै सिरी-ए फुटबल प्रवेश गरेका पोर्चुगलका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो युबेन्ट्सबाट आफ्नो खेल पदर्शन सुरु गरि सकेका छन् उनले युबेन्ट्सका निम्ति ४ बर्षे सम्झौता गरेका छन्। सुखद सुरुवात नभएता पनि रोनाल्डोको पारिश्रमिक भने सिरी-ए का अन्य खेलाडीको भन्दा निकै धेरै रहेको छ।
गोन्जालो हिगोइन भन्दा तिन गुणा बढी पारिश्रमिक लिदै युबेन्ट्सका ३३ बर्षे रोनाल्डो हर सिजनका निम्ति ३१ मिलियन यूरो लिने भएका छन्। इटालियन पत्रपत्रिकाले सार्बजनिक गरेको यो तथ्यांक मार्फत रोनाल्डोको पारिश्रमिक हिगोइन भन्दा3गुणा बढी भएको पुस्टि हुन्छ। रोनाल्डोको यो पारिश्रमिक र सिरी-एका अन्य खेलाडीको पारिश्रमिकमा निकै अन्तर देखिन्छ जसको कारण यो बिषय हर खेलाडी माझ आश्चर्यजनक मानिएको छ।
५ पटकका बालोन’डियर र च्याम्पियन लिग बिजेत क्रिस्टियानो रोनाल्डोका निम्ति यो सामान्य भएता पनि इटालियन लिगका निम्ति यो निकै ठुलो र आश्चर्यजनक रहेको दाबी गरिएको छ। यस रकमका लाएक भएता पनि उनको खेलको सुरुवात निकै खिन्नबोध बनेको छ। खेलमा र स्कोरमा फर्किने प्रयाश भने रोनाल्डोको हुनै पर्नेमा पनि क्लबको अपेक्छ्या रहेको छ।
गोन्जालो हिगोइन् जो हाल ए.सी मिलान ट्रान्सफर भएका छन उनको पारिश्रमिक ९.५ मिलियन यूरो रहेको छ। रोनाल्डोको टूरिन प्रवेशले गोन्जालोको ट्रान्सफर भएको हो या गोन्जालो बिस्थापित हुनुमा रोनाल्डोको हात रहेको छ।
त्यस्तै युबेन्ट्सकै पौलो डीय्बालाको पारिश्रमिक मात्रै ७ मिलियन यूरो रहेको छ साथै पीजनिकको पनि ६.५ मिलियन यूरो मात्रै रहेको छ। यी खेलाडीको आकडामा हेर्दा रोनाल्डोको पारिश्रमिक निकै उच्च रहेको देखिन्छ साथै युबेन्ट्सका निम्ति डिबिजनकै सर्बाधिक खर्च रहेको पनि देखिन्छ।
अल्जेरीका निम्ति खेलाडीको पारिश्रमिक खर्च मात्रै २१९ मिलियन यूरो रहेको छ, जुन हालसम्म कै उच्च खर्च हो। यस्तै ए.सी मिलन १४० र रोमा तेस्रो इटालियन सर्बाधिक खर्च गर्ने क्लब बनेको छ जसको खर्च ११६ मिलियन रहेको छ।